नुन कुन राम्रो ? कति खाने ? « Sadhana
मानव शरीरमा नुनले नसाहरु र मांसपेशीहरुको कार्य सञ्चालनमा मद्दत पु¥याउँछ । यस्तै प्रकारले नुनले कोशिकाभित्र पानीको मात्राको सन्तुलन मिलाउँछ । शरीरमा नुन कम भयो भने दिमाग सुन्निएर मान्छे बेहोस हुन्छ । एवं प्रकारले नुन बढी भयो भने रक्तचाप बढेर मुटुलगायत अन्य अंगहरुलाई नकारात्मक असर पार्छ । यसकारण नुन ठिक्क मात्रामा खानुपर्छ ।